Otomatiki nucleic acid yekubvisa chiridzwa chakavakirwa pane otomatiki yekudzora nzira yemagineti bead adsorption kupatsanurwa, iyo inogona kunyatso kukunda zvinokanganisa zvechinyakare nucleic acid nzira yekubvisa, uye nekuona nekukurumidza uye kwakaringana kugadzirira kwe1-96 sampuli panguva. Iine inoenderana nenucleic acid yekudzora reagent, inogona kugadzirisa mhando dzakasiyana dzemhando dzakadai senge serum, plasma, ropa rese, swab, chigaro, nyama, parafini chikamu, mabhakitiriya, fungi, nezvimwewo. Inogona kuiswa mukudzivirira kwechirwere uye kutonga, kupatsanurwa kwemhuka, kuongororwa kwekiriniki, kupindirwa-kubuda kuongorora uye kupatsanurwa, kudya uye kushandisa zvinodhaka, forensic mushonga, kudzidzisa nekutsvagisa kwesainzi uye mamwe minda.
Kubudirira kwepamusoro: izere magineti bar uye amplitude yekugadzirisa tekinoroji yekugadzirisa, inogona kubata nemhando dzese dzediki diki magineti, nyore kuwana kuburitswa kweiyo nucleic acid isina kuturika rusvingo rwemasara.
Kudzivirirwa: kushandiswa kweimwe-nguva yekubvisa casing uye mwenje weiyovhiivhi yekudzivirira inogona kudzivirira kusvibiswa kweaerosol kubva kumabatch akasiyana uye kudzikisa njodzi yekushanda.
Akangwara: Yakasarudzika jongwe kodhi yekudzora pani UI dhizaini, inogona kuve-imwe-nguva kuratidzwa kweanoshanda ma parameter, ari nyore kunzwisisa uye kushanda.
Standardization: akawanda anomhanya zvirongwa anogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa, uye iine hombe yekuchengetera kernel yekuona kubatana kweyekuyedza mamiriro.
Automated, high-throughput: nucleic acid extraction experiment automation, imwe-nguva kugadzirisa kwe1-96 sampuli, kugadzirisa nucleic acid kumhanya ingangoita 4-5 nguva dzebhuku rimwechete rekubvisa.
Nyanzvi inotsigira reagents: ine yakasimba technical technical rutsigiro, kuitira kuti mushandisi kuyedza kuve nyore uye nyore.
Kuvhura kweReagent: Kunze kweCorbition reagent yekurapa, inogona kubata ese marudzi emagineti bead nucleic acid yekuchenesa kits mumusika.
Magadzirirwo CBX32 Nucleic Acid Inobvisa
Mharidzo Kugona 1-32
Muenzaniso Vhoriyamu 50-1000 uL
Elution Vhoriyamu > 95%
Kubvisa Nguva 30 ~ 60 min
Kuvhara Temperature renji 25 kusvika 50 ℃
Plate Rudzi 96 yakadzika tsime ndiro
Reagent Rudzi Vhura chikuva
Uchishandisa Tembiricha CV <= 3%
Kugadzira Management Chivako chitsva, kugadzirisa, kudzima
Kugadzira Kuchengetedza Nhamba Kugadzira kwekuvaka, makumi maviri anogadza mutengi kugadzirisa
UV Kuvhenekera Ehe
Zviyero 400 * 420 * 440mm
Magetsi AC 110V-240V, 50Hz / 60Hz, 750W
Magadzirirwo M33 Nucleic Acid Inobvisa
Mharidzo Kugona 1-33
Zvadaro: 16 RT-PCR
CBX32 Nucleic Acid Inobvisa
CBX48 Nucleic Acid Inobvisa 96 Nucleic acid inobvisa